Alahady – 07/09/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady – 07/09/2014 – Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Bokin’i Ezekiela Mpaminany (33: 7-9)
Raha tsy miteny hananatra ny ratsy fanahy ianao, dia hadiniko aminao ny rany.
Koa hianao, ry zanak’olona, no efa notendreko ho mpitily, ho an’ny taranak’Israely, ary rahefa mandre teny aloaky ny vavako hianao dia hanaitra azy amin’ny anarako. Raha niteny aho nilaza tamin’ny ratsy anahy hoe: Ho faty marina hianao, ry ilay ratsy fanahy, ka tsy miteny hianao, hananatra ny ratsy fanahy hiala amin’ny làlany, dia ho faty amin’ny helony ihany ilay io, noho izy ratsy fanahy, nefa hadiniko minao ny rany. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa hianao, hialany amin’ny làlany, fa izy no tsy mety miala amin’ny làlany, dia ho faty ao amin’ny helony, fa hianao kosa hahavonjy ny fanahinao.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Rôma (13: 8-10)
Ny fitiavana no fahatanterahan’ny lalàna.
Aoka tsy hisy hanan-trosa aminareo, afa-tsy ny fifankatiavana; fa izay tia ny namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. >Satria ny hoe: Aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza miampanga ainga, aza mitsiriri-javatr’olona, mbamin’ny didy hafa rehetra, dia voalaza fohy ao amin’ny teny hoe: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, ka dia ny fitiavana no ahatanterahana ny lalàna an-tsakany sy an-davany.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Matio (18, 15-20)
Ary raha diso taminao ny rahalahinao, dia manatòna azy; ka rahefa mitokana hianareo, dia asehoy azy ny hadisoany. Raha mihaino anao izy, dia efa azonao ny rahalahinao; fa raha tsy mihaino anao izy, akà olona iray na roa hiaraka aminao mba ho tapaka noho ny teny hataon’ny vavolombelona roa na telo ny raharaha rehetra. Raha tsy mihaino azy ireo izy, dia ambarao amin’ny Eglizy; ary raha tsy mihaino ny Eglizy koa, dia ataovinao tahaka ny jentily sy ny poblikàna. Lazaiko marina aminareo fa na inona na inona hofehezinareo etý ambonin’ny tany dia ho voafehy any an-danitra; ary na na inona na inona hovahanareo etý ambonin’ny tany dia ho voavaha any an-danitra.Ary izao koa no lazaiko aminareo: raha misy roa aminareo mifanaiky etý ambonin’ny tany, na inona na inona angatahiny, dia ho azony avy amin’ny Raiko izay any an-danitra izany.>Fa na aiza na aiza iangonan’ny olona roa na telo amin’ny anarako, dia eo afovoany aho.